décembre 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Voalaza ao anatiny tantaran’izao tontolo izao izay mifanindra-dalana satria mazava hoe tamin’ny taona voalohany no lazaina fa teraka i Jesoa kristy no teraka izy,ny anaran’olona mpitondra dia voalaza fa ara-baiboly dia mifanaraka amin’ny tantaran’izao tontolo izao anehoana fa tena nisy io. Dia tamin’ny andro ny governora io no nisy ny fanoratana anarana voalohany na « recensement »;inona moa no ilaina ny recenssement,mety misy mpiasan’ny « statistique ao,mety misy efa zatra manao statistique koa ao.matoa ny fanjakana mampanao statistique dia misy tanjona ao izay,voalohany tiany ho fantatra dia tia marina ny vahoaka ka arakarak’izay koa no tokony hoe ohatr’inona marina izany ny hetra tokony alohan’ny vahoaka,izany no mahatonga ireny fanisam-bahoaka ireny,mandany volabe ny fanjakana manao an’ireny recensement ireny,mandefa olona mitety isan-tokantrano mba ahazahona mampiditra ny hetra ara-dalana,io no nahatonga ny fanisam-bahoaka voalohany,ny vahoaka tsy maintsy mankany aminy tanindrazana ary any no atao ny recensement ,i Zozefa taranak’i Davida izany dia tsy maintsy nandeha nankany Jerosalema,zavatra tsy noheritreretiny izany hoe ho teraka an-dalana izany i Maria,nandeha namakivaky ny lalana kanjo nony tonga teo Betlehma,rehefa ho tonga eo amin’ilay toerana tokony ho aleha dia tonga ny fotoana ahaterahana,nandeha nitady tranom-bahiny kanjo tsy nisy ndirana dia ny tranom-bahiny no niteny araka ny voalazany soratra masina hoe misy tran’omby ao raha mety aminareo,tany no nahaterahan’i jesoa,ny tranom-bahiny tamin’izaby andro izany dia tsy mba tahaka ireny hotely aty amintsika ireny hoe misy 5 étoiles,3étoiles,hoe chambres tsotsotra kely tsy mba tahaka ireny;fa ny atao hoe tranom-bahiny tamin’izany andro izany dia trano iray malalaka be tsy misy efitra dia tsihy no velarina izany hoe afaka misy vahiny maro be indray matory ao anaty ny trano iray ,izany no tranom-bahiny taminy andron’i Jesoa dia tsy omby intsony ilay trano fa marobe ny olona tonga handeha hisoratra anarana dia lasa tany an-tranon’omby no nahaterahan’i jesoa.Inona indray ny tranon’omby? (suite…)
Continuer la lecture Sasak’alin’ny noely 2014 – 24/12/2014 – Toriteny
Zazalahy no indro nomena antsika
Ny vahoaka nandeha tamin’ny haizim-pito, nahita mazava lehibe; ary ireo nonina tamin’ny tany aloky ny fahafatesana, namirapiratan’ny mazava. Nampitombo ny vahoakanao Ianao, ary nataonao lehibe ny hafaliany; ka mifaly eo anatrehanao, toy ny fifaliana raha fararano izy, toy ny fihobiana an-kafaliana, raha mizara babo. Satria ny jioga nanavesatra azy, ny tsora-kazo nikapohana ny lamosiny, ny tehin’ny mpitoroka azy, dia samy notapahinao, toy ny tamin’ny andron’i Madiàna. Ny kapan’ny mpiady rehetra tamin’ny fikatrohana mbamin’ny kapaoty nihosin-dra rehetra, dia atao anatin’ny afo: ka levon’ny afo. Fa misy zaza teraka ho antsika; Zazalahy nomena antsika; ka ny Fanjakana napetraka eo an-tsorony; ary ny Anarany atao hoe: Mpanolo-tsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, Ray mandrakizay, Andrian’ny fiadanana, mba hanitatra ny fanjakana, sy hanome fiadanana tsy manam-pahataperana, ho an’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenany azy sy hanamafisany azy, amin’ny hitsiny sy ny rariny, hatramin’izao ka ho mandrakizay. Ny zotom-pon’ny Tompon’ny tafika no hanatanteraka izany.
Efa niseho ho an’ny olona rehetra ny fahasoavan’Andriamanitra
Mpamonjy no teraka ho anareo (suite…)
Continuer la lecture Sasak’alin’ny noely 2014 – 24/12/2014 – Tenin’Andriamanitra
« Mifalia fa efa akaiky ny ny Tompo »
Io no hafatra ezahantsika iainana mandritra ity herinandro ity. Samy manome an’izay amin’ny fomba samy hafa ny vakiteny telo izay retsika teo. Mifalia fa akaiky ny Tompo. Raha ny Evanjely no raisintsika avy hatrany, vao manomboka ny evanjelin’I Md Joany, izy miteny hoe “tany am-boalohany ny teny, ny teny dia avy amin’Andriaanitra sns…”, vao tapitra izay filazana mikasika ny teny tonga nofo izay dia avy hatrany momba an’I Joany Batista no resahana: “Lehilahy iray nirahan’Andriamanitra, Joany no anarany”. Mandritra ny herinandro faharoa sy fahatelo amin’ny Avent dia mampiseho amintsika ny endrika sy ny toetran’I Md Joany ny fiangonana. Efa tamin’ny heriny isika no niezaka namantatra hoe iza moa ity Joany batista ity. Dia anio koa dia mbola mamerina farany hoe iza marina ity Joany batista ity. Satria amin’ny heriny da efa mifantoka amin’I Masina Maria indray isika satria efa akaiky sy mialoha ny fankalazana ny Noely dia miresaka momba azy isika. Fa androany no miresaka farany mikasika an’I Joany Batista.
Iza moa ity Joany Batista ity? (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 14/12/2014 – Toriteny
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 61, 1-2a.10-11)
Ho revon-kafaliana ao amin’ny Tompo aho.
Ato amiko ny fanahin’ny Tompo, satria voahosotry ny Tompo aho; nirahiny hitondra teny soa mahafaly amin’ny mahantra, hamehy ny ferin’ireo torotoro fo; hampandre amin’ny babo fa afaka sy ny ao an-tranomaizina fa alefa; hitory taom-pahasoavana anankiray ho an’ny Tompo. Ho revon-kafaliana eo amin’ny Tompo aho, ary hiravoravo amin’ny Andriamanitro ny foko, satria notafiany fitafiam-pamonjena aho.ary nakanjoiny akanjom-pahamarinana, toy ny mpampakatra miravaka diadema eo an-dohany; toy ny am-pakarina miraratra ny firavany sarobidy. Fa toy ny ampanirian’ny tany ny tsimoka eo aminy, sy toy ny ampitsimohan’ny zaridaina ny voa nafafy eo aminy no ampanirian’ny Tompo Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fiderana, eo anatrehan’ny firenena rehetra.
Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Tesalônika (1 Tes 5, 16-24)
Hotahiriziny tsy hanan-tsiny ho amin’ny fahatongavan’ny Tompo ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo.
Ry kristianina havana, mifalia mandrakariva ; mivavaha lalandava ; ary misaora amin’ny zavatra rehetra, fa izany no sitra-pon’Andriamanitra, ao amin’i Kristy Jesoa ho anareo rehetra. Aza mamono ny Fanahy ; aza manamavo ny faminaniana, fa zahao toetra ny zavatra rehetra, ka tano izay tsara ; fa fadio kosa na dia izay mitarehin-javatra ratsy fotsiny aza. Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hanamasina ny tenanareo manontolo, ka hotahiriziny tsy hanan-tsiny ho amin’ny fahatongavan’i Jesoa Kristy Tompontsika avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo. Tsy mivadika Ilay niantso anareo ka Izy ihany koa no hanefa izany.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 1, 6-8. 19-28)
Eo afovoanareo, misy olona anankiray izay tsy fantatrareo. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 14/12/2014 – Tenin’Andriamanitra
Manomboka ny famakiana ny Evanjelin’i Md Marka isika, dia ny anombohany azy dia ny hoe ; « Fiandohan’ny Evanjelin’i Jesoa Kristy, Zanak’Andriamanitra ».
Mapatsiaro ihany koa ny fahariana, fony nahary an’izao tontolo izao Andriamanitra tamin’ny voalohany, ao amin’ny Jenezy toko voalohany. Tadidio koa Md Joany, vao manomboka izy dia miteny an’io fiandohàna io : « Tamin’ny volohany ny Teny, ary ny Teny dia tao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra niteny ». manomboka ny taonan’ny fiavian’ny Tompo isika dia manomana ny fo amam-panahy ny tsirairay avy. Io ny antsoantso nataon’Izaia mpaminany, ary io koa no averin’i Md Joany Batista amin’ny Evanjely, miantso tany an’efitra : « Amboary ny lalan’ny Tompo, ahitsio ny alehany ».
Tsara ihany ny hiresahantsika an’ity tany efitra ity. Na tao amin’ny vakiteny voalohany, na tao amin’ny Evanjely retsika teo, dia sami miteny izay “misavà ny lalana any an’efitra”, hoy Izaia mpaminany. Tamin’io fotoana io, dia tao ampahababoana ny zanak’Israely. Nampanantenaina faminjena: “misavà lalana any an’efitra”. Inona moa ity efitra ity?
Hitantsika koa tao amin’ny Evanjely teo fa anverin’I Joany Batista io. Joany Batista dia manao fitafy kabary.Raha jerentsika ny fitafiny dia ny hoe “volon-drameva no fitafiny, tantely remby izany nofihinany”. Io fitafin’I Joany Batista io, izany no fanaon’ny olona any an’efitra. Dia tsara hiverenantsika dinihina hoe inona moa ity tany efitra? Inona ny zavatra hitantsika any amin’ny tany efitra? Ho anareo izay efa mba nahita an’izany dia mahalala hoe tahaka izao ny zavatra hita: tora-pasika. Ary io no ho avy eto amintsika tsikelikely noho ny fahapotehan’ny tontolo iainana. Hitantsika fa isan-taona isan-taona dia mihamihena ny rano. Miha-mijaly rano isika. Io dia vokatry ny tsy fahaizantsika mikarakara, miaro ny tontolo iainana. Raha mbola misy foana ny dorotanety, hitantsika fa tototry ny atsanga ny tanimbary. Mihena ny tany azo volena ary mihena ny rano. Isan-taona isika dia matin’ny dorotanety foana.Ny avy any atsimo efa mihamitombo tsikelikely ny fasika. Hanana an’izany hoe tany efitra izany isika afaka fotoana fohy angamaba rha tsy mitandrina. Any amin’ny tany efitra, tsy misy zavatra ho hita, tsy misy zavatra azo antenaina.Tsy misy hazo azo ialonkalofana, tsy rano ho azo sotroina fa dia tora-pasika no hita.Ary tsy misy lalana mazava hoe ity no lalana haleha. Fa dia mamakivaky tendrombohitra sy fasika. Fa dia miejry fotsiny hoe avy aiza ny masoandro, ka miatsinanana izany no haleha na miankandrefana. Fa tsy misy lalana misoritra mazava.Mandeha amin’ny alina di any kintana no ahalalana hoe ary ny atsimo; mandeha amin’ny atoandro dia ny fitodiky no masoandro ho ahitàna hoe ary no atsimo. Dia izay fa tsy misy lalana. Io nefa no antsoantson’ny mpaminany, ary averin’I Joany Batista hoe :”Misavà lalana any an’efitra”.
Ny tany efitra, ankoatry ny toetra mampiavaka azy, dia toerana ilaina hitokanana. Mandeha mitokana. Toerana tsy ahenoana tabataba fa iainana ny fahanginana. Izay ny tany efitra. Ilaintsika io eo amin’ny fiainana. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 07/12/2014 – Toriteny